Wayelokhu encoma ubuhle bami uSfiso ngosuku lokugcina – Ayanda Ncwane | isiZulu
Wayelokhu encoma ubuhle bami uSfiso ngosuku lokugcina – Ayanda Ncwane
u-Ayanda Ncwane efika kwinkonzo yomyeni wakhe
Umsebenzi wami ukugcina umama wami emamatheka njalo - Indodana kaNcwane
Durban - U-Ayanda Ncwane ukhumbula izinsuku zokugcina azichitha nomyeni wakhe kanti uthi wayelokhu ebabaza ubuhle bakhe kangangokuba waze wambuza ukuthi ukhulelwe yini.
NgeSonto, nokwakuwusuku lokugcina bendawonye nomyeni wakhe, u-Ayanda uthi wayelokhu emteketisa engaqedi uSfiso Ncwane encoma ubuhle bakhe.
“Wayelokhu engibuka engibuza ukuthi ngamuhle kangaka ngikhulelwe yini, lokhu wayekusho ngoba sasizama ingane yentombazane.
“Ngavele ngahleka ngamtshela ukuthi kangikhulelwe, yize kunjalo wayelokhu ebabaza ubuhle bami ethi ngimuhle ngokwedlulele,” kusho u-Ayanda.
Le ntokazi ibivakashele ohlelweni i-Real Talk with Anele, lapho ekhumbule khona umyeni wayo ngezinsuku zokugcina, kwazise phela ukuthi ngomhlaka-21 Ephreli kugujwa usuku lokuzalwa lukaSfiso.
U-Ayanda uthi yize sekudlule izinyanga ezine umyeni wakhe ashona, kusekusha emqondweni wakhe futhi nempilo ekhaya isenzima kakhulu ngoba abakajwayeli ukuphila ngaphandle kwalesi sihlabani somculo wokholo.
“Kwesinye isikhathi nginokukhipha ipuleti lakhe sengiphaka, bese uyabuya umqondo wokuthi akasekho emhlabeni futhi ngeke asabuya ekhaya.
“Ziningi izinto ezisawuphazamisa umqondo wami, kodwa ngathatha isinqumo sokuthi kumele ngisukume kungaze kumosheke izinto,” kuqhubeka yena.
OLUNYE UDABA:Iyisinengiso le ntombazane empilweni yami - Umama kaSfiso Ncwane
U-Ayanda uthi yize kunzima kodwa kumele aqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle kwezamabhizinisi ngoba yikona okubondlayo bewumndeni.
“Nginebhizinisi okumele ngiliqhube, izingane zibheke mina futhi kunabasebenzi ukumele bondle imindeni yabo ngakho-ke ngeke ngikwazi ukuhlala dekle phansi ngoba noSifiso ubengeke akuthande lokho,” kugcizelela yena.
Uthi kuzoba buhlungu ukugubha usuku lokuzalwa komyeni wakhe engasekho emhlabeni, kodwa bazoqhubeka nezinhlelo ayejwayele ukuzenza minyaka yonke ngosuku lwakhe lokuzalwa.
“Wayevame ukubamba ithonamenti yebhola endaweni yangakubo eMthwalume lapho akhulela khona njalo ngonyaka. Nakulo nyaka sizobe siseMthwalume, kudlalwa ibhola futhi kujatshuliswa umphakathi njengoba wayehlale enza umyeni wami,” kusho u-Ayanda.
Emizuzwini eyi-42 edlule